Vivo dia manolotra smartphone iray hafa an'ny Triple Camera ao amin'ny TENAA | Androidsis
Vivo dia mazàna manao fanatrehana matetika matetika eo amin'ny sehatra TENAA, rafitra iray mifehy sy manamarina sinoa handalovan'ireo finday avo lenta rehetra izay hamidy ao.
Niverina teo afovoan'ny fifantohan-tsaina izao ny orinasa noho ny fidiran'ny iray amin'ireo fitaovana ao aminy ao amin'ny angon-drakitry ny masoivoho. Ity dia niseho niaraka tamin'ny a fakan-tsary triple aoriana ary fiasa mahazatra ary famaritana ny terminal midadasika. Manaraka izany dia manambara bebe kokoa momba ity finday ity izahay.
Ny smartphone Vivo vaovao sy miafina izay nalaina tamin'ny sehatra TENAA dia voasoratra anarana amin'ny kaody 'V1921A'. Izany, araka ny fanazavana hita ao anaty lisitra, tonga miaraka amin'ny efijery AMOLED 6.38-inch miaraka amina FullHD + vahaolana 2,340 x 1,080 teboka, Ka noho izany dia hahazo endrika fampisehoana 19.5: 9 misimisy sy mahazatra isika.
Fijery ny lafin'ny Vivo V1921A ao amin'ny TENAA
Ny famaritana hafa sy ny fiasa amin'ny finday vao nipoitra dia ahitana safidy roa ho an'ny RAM ary telo ho an'ny toerana fitahirizana anatiny, izay 6/8 GB sy 64/128/256 GB. Noho izany, ho mendrika isika karazana fahatsiarovana maro, raha vao mahatratra amin'ny fomba ofisialy ny tsena.
Ny processeur ampiasainy dia octa-core amin'ny refy fatratra 2.3 GHz. Ity dia ho tompon'andraikitra amin'ny fametrahana ny interface ny Android Pie izay efa napetraka mialoha amin'ny finday, izay azo antoka fa ho tonga hoso-doko ao ambanin'ny sosona fanaingoana ny mpanamboatra sinoa, izany hoe FunTouchOS. Mba hamindrana izany rehetra izany dia batterie mahazaka 4,420 mAh no voafidy.
Farany, ny smartphone Vivo izay mbola ho fantatsika dia navoaka tamin'ny pejy mainty. Ho fanampin'izany, ny famaritana azy dia manondro fa io kinova loko io ihany no misy. Etsy ankilany, ny daty fandefasana azy sy ny fisian'ny tsena, ary koa ny vidiny, dia mbola fantatra ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Vivo dia mampiditra finday fakan-tsary telo hafa ho an'ny TENAA